Inkcazelo Yezinto Ezinokonwatyelwa Kwi-intanethi - Iziko Loncedo lakwa-Airbnb
Indlela esebenza ngayo i-Airbnb – isihloko soncedo
Inkcazelo Yezinto Ezinokonwatyelwa Kwi-intanethi – inqaku loncedo
Uyafuna ukunyuka intaba nemonki yamaBhuda? Ukutya i-pasta ebusuku noomakhulu abathathu kona? Uze kwindawo echanileyo—ekuyo nayiphi na indawo okuyo.
Izinto Ezinokonwatyelwa Kwi-intanethi ngamatheko aboniswa ngoku enzekayo akhokelwa zingcali kuZoom, aze akunike ithuba lokudibana nabantu abasemhlabeni wonke kumaqela amancinci ukuze nibe nexesha lokwazana nelingasoze lilibaleke.
Indlela ezenziwa ngayo
Yiza unjalo: Ungathatha inxaxheba ngekhompyutha, i-tablet okanye ifowuni.
Zisoloko ziboniswa ngoku zenziwayo, usoloko ukwazi ukuthatha inxaxheba ibe kufuneka zihambiselane nemigangatho efanayo Nezinto Ezinokonwatyelwa ekuyiwa ubuqu kuzo. Funda okungakumbi ngezinto ezongezelelekileyo ezifunekayo kwiZinto Ezinokonwatyelwa kwi-intanethi.
NjengakwiZinto Ezinokonwatyelwa ekuyiwa ubuqu kuzo, iindwendwe zineentsuku eziyi-30 zokubhala izimvo, ezabucala eziya kuMbuki Zindwendwe okanye ezivela kumntu wonke zokunceda iindwendwe zexesha elizayo.
Ubawela ukujoyina enye? Funda ngokubhukisha. Ucinga ngokuzivavanya ukuba unabo na ubuchule bokuba nguMbuki Zindwendwe? Nazi izinto ekufuneka uzazi kunye nendlela yokuqalisa.
Yintoni ekufuneka ndiyazi ngaphambi kokuya Kwinto Enokonwatyelwa Kwi-intanethi kuZoom?